Nhau - Zvakanakira kupatsanura fanera
Midziyo Uye Midziyo
Inoshandiswa Kune Distillation
Porcelain Kukuru Mukutonga kwechiFascist
Kutarisa Mahwendefa, Akapenya
Desiccator Discs, Yakapenya
Clamp Uye clip
Medical Spoons Uye Spatulas
Miromo Inonamatira Forceps
Girazi Zvigadzirwa Maitiro
Zvakanakira kupatsanura fanera
Zvakanakira: Izvo zvinoitika uye kumisa kwekuita zvinogona kudzorwa.
Kuparadzanisa fanera rudzi rwegirazi rekuyedza ngarava, kunyanya inoenderana neyekuparadzanisa fanera inoshandiswa pakuedza kwemakemikari. Kusanganisira muviri webhaketi, chifukidziro chebhaketi chinofukidza muromo wepamusoro wemuviri webhaketi. Piston-nzira nhatu yakaiswa pachiteshi chezasi chemu bhakiti, uye madoko maviri epistoni akabatana nemapombi maviri ezasi. Iko kushandiswa kweiyo modhi yekushandisa kunogona kuita iyo yekuyedza mashandiro maitiro kuita nyore kudzora uye kudzikisa kusimba kwevashandi. Kana huwandu hwemvura yekuparadzaniswa hwakura, mvura mbiri dziri mubhakiti dzinogona kuyererwa kuhubhu yepasi panguva imwechete nekufambisa tee yepiston isina kuchinja mudziyo. Izvo zvinogona kuitwa mune imwechete kuenda.
Segirazi rinopatsanura fanera mugadziri & mupi wezvigadzirwa zvekurapa nemidziyo, Huida haigone chete kupa vatengi mhinduro dzese dzemidziyo yerabhoritari, asiwo inopa huwandu hwakazara hwezvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye nemasevhisi anoenderana eruzivi magirazi. Kugamuchirwa kutumira muvhunzo kuti uwane rumwe ruzivo.
Yancheng Huida Glass Instrument Co., Ltd. ndiye mugadziri ane ruzivo, anonyanya kuburitsa magirazi erabhoritari yepamusoro uye mamwe marabhoritari. Bhendi re "YCHD" rinovira girazi dzakateedzana uye volumetric yekuyera zviridzwa zvinozivikanwa pasi rese.
12F South chivakwa, Julong pakati, Feng Huang Hui, 266 South Jiefang mugwagwa, Yancheng, Jiangsu, China